Ian Chan oo ka tirsan Kooxda Wiilasha Mirror Hadda waxay taageertaa Circle HealthPod
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Ian Chan oo ka tirsan Kooxda Wiilasha Mirror Hadda waxay taageertaa Circle HealthPod
Circle HealthPod waa nidaam ogaanshaha guriga oo ay samaysay Jaamacadda Oxford, oo leh natiijooyin tayo leh oo PCR ah qiyaastii 20 daqiiqo. Ian wuxuu ku luuqeeyaa heesta "Waa Maalin Cusub oo Cusub" si loo xoojiyo shakhsiyaadka inay dib u bilaabaan nolosha caadiga ah oo ay ku kaxeeyaan bulshooyin caafimaad qaba Circle HealthPod.
Genetics iyo shirkadda baadhista caafimaadka ogaanshaha ee Prenetics Limited, waxay ku biirtay gacmaha xubinta la jecel yahay ee kooxda caanka ah ee kooxda wiilka caanka ah "Mirror," Chan Cheuk-yin (Ian), si ay ugu adeegaan safiirka alaabta iyo jilaa heesta ganacsiga ee Circle HealthPod.
Circle HealthPod waa nidaam ogaanshaha degdega ah oo bixiya natiijooyinka tayada PCR ee COVID-19 ku dhawaad ​​20 daqiiqo goobta daryeelka ama guriga. Tignoolajiyada kacaanku waxa ay wacad ku martay in ay jebiso xayndaabyada dunida ka jira oo ay joojinayso kala fogaanshaha shakhsiyada.
Waxaa soo saartay Jaamacadda Oxford, Circle HealthPod waa mid ka mid ah hababka ogaanshaha guriga ee ugu horumarsan adduunka. Waa shaybaadhka jeebka ku xidhan oo bixiya 98.4% sax ahaanshaha ogaanshaha COVID-19, oo ay ku jiraan 99.9% noocyada fayraska la yaqaan sida fayraska kala duwan ee Delta. suufka sanka gaaban ee aan xanuunka lahayn ayaa loo isticmaalaa si loo ururiyo muunado ka hor inta aan la qaadin xoojinta aashitada nucleic. HealthPod waxay qaadataa ku dhawaad ​​20 daqiiqo si ay ugu keento natiijooyinka tayada PCR shaqsiyaadka si toos ah HealthPod ama codsigeeda mobilada, taasoo ka dhigaysa mid ku haboon, degdeg ah, xirfad leh, oo la isku halayn karo.
Wadashaqeyntu waxay ku biirtay xoogaggii danjiraha badeecada ee dhowaan lagu dhawaaqay Ian, oo xubin ka ah kooxda caanka ah ee sanamka kooxda "Mirror." Codka soo jiidashada leh ee Ian ayaa abuuray heeso badan oo caan ah iyada oo loo marayo dhaqdhaqaaqa muraayadda iyo mashaariicda gaarka ah, kuwaas oo dhammaantood lagu qaabilay xamaasad ay taageerayaashu, taas oo ka dhigaysa Ian caan ku ah dabeecaddiisa qorraxdu iyo wakiil weyn oo Hong Kong ah. Marka laga soo tago kartidiisa muusiga, Ian sidoo kale waa ciyaaryahan weyn.
Xubin hore oo ka tirsan Kooxda Kubadda Laliska Ragga ee Hong Kong, jecel jimicsiga, kubbadda koleyga, iyo xiiseeyaha Taekwondo, Ian wuxuu aaminsan yahay muhiimada caafimaadka. Sawirka caafimaadka wanaagsan ee Ian ayaa ka dhigaya safiirka wax soo saarka ugu fiican, isagoo ku dhiirigelinaya shakhsiyaadka inay dib u bilaabaan nolosha caadiga ah oo ay noqdaan kuwo miyir qaba. Muusigga Ian wuxuu muujinayaa sheekada Circle HealthPod isagoo ku dara fariinta caafimaadka jireed iyo maskaxeed ee erayada ganacsiga, faafinaya laxan soo jiidasho leh oo rajeynaya inuu bogsiiyo bulshada waagan cusub.
Himilada Circle HealthPod waxa lagu gudbiyay heesta "Waa Maalin Cusub oo Cusub" oo uu ku luuqeeyo Ian oo si gaar ah loogu sameeyay alaabtan ganacsi. Sida laxanka xamaasadda leh u buuxinayo codkiisa sare u qaadida Wuxuu sheegaa in imtixaanku u keeni karo xaqiijin, xasillooni maskaxeed, iyo ilaalin bulshada. Danny Yeung, Co-founder iyo maamulaha kooxda ee Prenetics, ayaa sheegay in xayaysiisyada cusub ee taxanaha ah lagu sii dayn doono ViuTV.